I-WordPress: Izizathu ezi-3 zokufaka iJetpack ngoku! | Martech Zone
NgoLwesithathu, uDisemba 4, 2013 NgoLwesine, Julayi 9, 2015 Douglas Karr
Izolo ebusuku bendonwabile ukuba lundwendwe kwi #atomicchat Ingxoxo ye-Twitter ziqhutywa ngabantu abakhohlakeleyo kwi Ukufikelela kwiatom. Sasixoxa ngeeplagi ezinkulu zeWordPress kunye neplagi enye ekufuneka ndiyizise amaxesha ambalwa jetpack.
IJetpack ibeka ngaphezulu indawo yakho yeWordPress eyabelweyo kunye nelifu elimangalisayo leWordPress.com.
Unokutyelela jetpack Indawo yeWordPress ngeenkcukacha ezongezelelweyo, kodwa izinto eziphambili ezi-3 zindimele:
Ukuba awukwazi ukufunda indawo yakho kakuhle kwisixhobo esiphathwayo, uninzi lweendwendwe zakho kunokwenzeka ukuba zikubheyile. Iindaba ezimnandi zezokuba awunyanzelekanga ukuba uchithe itoni yemali kumxholo omtsha ophendulayo okanye ongezelelweyo kwiselfowuni, iWindowsPress uyigubungele ngomxholo omnandi, ongasindi weselula osebenza kamnandi ngaphandle kwebhokisi.
Ukuba bendinesikhalazo, inokuba umxholo awugcinwanga kulawulo lomxholo-ke ukuba wenza naluphi na uhlengahlengiso, ukuhlaziya iplagi kuya kubacima. Ukongeza, iiplatifti zesoftware ezinje ngeTunes zibonelela ngedatha yemeta evelisa iqhosha lofakelo losetyenziso lwesiza. Oku kunokuba yinto ebalulekileyo kule plugin.
On Martech Zone, sineefowuni ezinamandla kwisenzo ngokusekwe kudidi. Ukuba ufunda inqaku losasazo lwentlalo, ibha esecaleni ibonisa umnxeba weendaba zosasazo kwizenzo ezivela kumxhasi. Isebenze kakuhle kodwa ifuna ukuba sisebenzise eyethu iplagi ukuyenza isebenze. Hayi kwakhona! jetpack iza ne ukubonakala Inketho ekuvumela ukuba usete imigaqo entsonkothileyo xa uza kubonisa iwijethi ethile.
Ukunyuselwa ngokwasentlalweni komxholo wakho akusokhetho, kubalulekile kwisicwangciso ngokubanzi. I-WordPress isombulule lo mngeni ngokongeza amandla okupapasha iiposti zakho kwiinethiwekhi zakho zentlalo. Ndijonge phambili ekubeni bongeze kuGoogle + kwaye iya kuguqula ibhlog yethu iye kule plugin ngokukhawuleza nje ukuba kongezwe. Ngoku sisebenzisa i I-WordPress kwiBuffer iplagi kunye ne-buffer yokwabelana ngezithuba zethu.
Mhlawumbi ibaluleke kakhulu nge jetpack kukuba yeyokuzalwa kwiWindowsPress kwaye yakhiwe ngabaphuhlisi beWordPress. Ngenxa yobungakanani beeplagi ezininzi kwintengiso, kuyamangalisa ukuba nezi zixhobo zithembekileyo! Faka ifayile jetpack ngoku kwaye usebenzise eli nqaku kwaye uninzi, uninzi ngakumbi!
tags: iwijethi enamandlaUmxholo ophathwayoizibaloukubonakalawidgetiplagi yamagama